Ukuphunyezwa kokungafihli - Umndilili oSasazekayo wokuSasazeka | I-FXCC
Ikhaya / Trading / Ukubekwa elubala / Ukusasazeka okusebenzayo
Umndilili wokuSasazeka okuSebenzayo kokuphunyezwa
Ukungafihlisi lilitye lembombo lenkonzo esiyinikezelayo, ukuba ukuvuleka kufikelela kuko konke esikwenzayo.
Sizimisele kakhulu kwimpumelelo yakho sibonelela ngezixhobo ezininzi abangazisebenzisi abo sikhuphisana nabo.
Isixhobo sethu esiqhelekileyo sokusasaza sityhila abathengi bethu ngokuthe ngqo ukusasazeka kwiiseshoni zamva nje. Ungasebenzisa imenyu ehlayo ukukhetha into ofuna ukuyiphanda. I-axis ye-Y ibonisa ukusasazeka, i-X-axis ixesha.
Umzobo womgca ubonakalisa ukusasazeka okukhoyo ngexesha elithile, kwaye uyabona umyinge we-15 wexabiso lokusasazeka kwexabiso. Ungachonga ngokukhawuleza iipikisi kunye namaxesha okonyuka kokungazinzi, mhlawumbi xa kusenzeka isiganeko seendaba.
Ukusasazeka ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa (ukubiza ixabiso kunye nokunikezela) amaxabiso ezixhobo zemali. Zimbini iintlobo zokusasazeka: zilungisiwe kwaye zidada. Ukusasazeka okungaguqukiyo akuguquki ngokwemihla yentengiso yemihla kunye nexesha. Ukusasazeka kokudada kuya kutshintsha ngokuxhomekeke kwezi zinto zimbini. Ukusasazeka kokudada kuyangqinwa ukuba kuyonga iindleko Njengabarhwebi bafumana elona xabiso lilungileyo lentengiso ngalo naliphi na ixesha elinikiweyo kwintengiso. Ukusasazeka okungagungqiyo kuya kuba nenxalenye yeinshurensi eyongezwe kwisilinganiso kuba umrhwebi kusenokufuneka akhusele ukubonakaliswa kwabo.Funda ngokugqithisileyo
Ukufunda ulwazi lwetshathi
Unokukhetha ixesha elifutshane okanye elongezelelekileyo ngokunqakraza kwi-zoom feature ebekwe kwikona esekunene yetshathi. Ukuba uhamba ngaphezulu kwezipikha, uyawabona amaxesha xa ukunyuka kwemarike kunyuse ukubangela ukwanda. Ukwanda kokusasazeka kunokuba ngenxa yeendaba ezaphulwayo, ukupapashwa kwedatha okanye umcimbi wezoqoqosho olukhulu.